Izindlu ezithokomele eduze ne-Vegas Crocus City kanye ne-metro Strogino
Krasnogorsky District, Moskovskaya oblast', i-Russia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Татьяна
Isitudiyo esisha, sesimanje, esikhanyayo esinazo zonke izinsiza, lapho ukwelashwa kwe-antiviral kanye ne-quartzing kwenziwa khona ngemuva kwesivakashi ngasinye. Eduze: Isikhungo sokuthenga nokuzijabulisa sase-Crocus City, inxanxathela yezitolo nezokungcebeleka yase-Vegas Crocus City, ihholo lekhonsathi ye-Crocus City Hall enamazinga amaningi, i-Oceanarium, ibhilidi likaHulumeni Wesifunda sase-Moscow, isikhungo sezitolo i-Auchan, izitolo ezinkulu ze-Leroy kanye ne-Your House. I-Rublevsky Beach, i-Zhivopisnaya bay, i-Lipovaya Grove.
Ngemuva kwesivakashi ngasinye, ukwelashwa kwe-antiviral kanye ne-quartzing kwenziwa. Indlu nayo ihlanzwa nsuku zonke futhi kunesikhungo sezokwelapha lapho ungathola khona izeluleko nosizo lokuqala. Isitudiyo sisha, sikhanyayo, sihlanzekile ngayo yonke ifenisha edingekayo nezinto zikagesi. Indlu yesimanje, ezokuphepha, ilifti, irempu, indawo yokungena ehlanzekile, insimbi. umnyango, ukubhekwa kwevidiyo.
Ngaphakathi kwebanga lokuhamba: Crocus City ukuhweba, embukisweni kanye samabhizinisi, Vegas Crocus City yezitolo nokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi, Crocus City Hall multi-level ehholo, Oceanarium, isakhiwo eMoscow Region Uhulumeni, Auchan ethenga isikhungo, Leroy Hypermarkets kanye "Umuzi Wakho". Kanye namabhishi angu-2 kanye netheku elihle.
UТатьяна Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Krasnogorsky District namaphethelo